University of Miami - Study na USA. Education Overseas.
University of Miami Nkọwa
Echefukwala atụle University of Miami
Idebanye aha na University of Miami
University of Miami bụ a onwe alụmdi na e hiwere na 1925.
Nkuzi ụgwọ na University of Miami na- $46,000 (Aprox.).
Emi odude ke Southern Florida, na University of Miami nwere ihe ezigbo ọnọdụ maka ụmụ akwụkwọ ndị n'èzí na-amasị. Na-ewu ewu tụrụ dị ka South Beach, na Florida Igodo na Everglades National Park dị nso, ụmụ akwụkwọ nwere ọtụtụ ohere maka mmiri egwuregwu, hiking na sunbathing. Downtown Miami, kwa nso ụlọ akwụkwọ, bụ a ọma n'isi egwuregwu na omenala n'etiti. on campus, karịrị 2,400 ụmụ akwụkwọ na-arụ ihe karịrị 30 fraternities na sororities. Ụmụ akwụkwọ nwekwara ike ịhọrọ site na ihe karịrị 250 klọb na òtù isonyere. Freshmen bụghị iwu na Ndị bi na ya campus, ma ọtụtụ na-ahọrọ na-ebi na ụlọ akwụkwọ ise residential kọleji. The obodo, modeled mgbe ụlọ na England Oxford na Cambridge mahadum, ikpokọta bi na-amụta na otu nri, abụ uri agụ, sports na ndị ọzọ. Maka ụmụ akwụkwọ na-adịghị ebi ndụ mahadum ụlọ, na COMMUTER nnyemaaka Program ụzọ abụọ freshmen na-on-campus nnọchiteanya na-enyere obi dịtụ onye na mgbanwe ịbanye na mahadum. University of Miami Division m sports ìgwè na-mara dị ka ifufe na-asọrịta mpi na Ala gbara osimiri okirikiri Division nke Atlantic Coast Conference. Na ụlọ akwụkwọ mascot bụ Sebastian na Ibis, a ụdị ala opitoropi nnụnụ na mara maka weathering okpomọkụ oké ifufe.
The University of Miami a maara dị ka a nnyocha alụmdi, na nnyocha ohere na-amalite na Undergraduate larịị. Kwa afọ campus ihe na-agụnye Canes Nkiri Ememme, nke showcases nwa akwụkwọ na-emepụta fim, na Sportsfest, ụbọchị atọ nke asọmpi n'etiti obibi nnukwu ọnụ ụlọ ìgwè. Undergraduates na-mara maka Ijigidesi akwụkwọ spirit na omenala dị ka Boat Burning ememe ẹkenịmde ke Lake Osceola n'oge homecoming. Ọwọrọiso Alumni nke University of Miami na-agụnye omee Sylvester Stallone na egwuregwu Gloria Estefan.
N'ihi mmiri ọgwụ na Nutrition
Ilekota Science na Policy
Geography na Regional Studies
Religion na Health Care
Ụlọ ihe nkiri Arts A.B. (B.A.)
Ụlọ ihe nkiri Arts B.F.A.
(nnyocha / Pọtụfoliyo review chọrọ)
Design / ụzụ Production
Musical Ụlọ ihe nkiri
Ụlọ ihe nkiri Management
Women na Gender Studies
Health Sector Management na Policy
International Finance na Marketing
*Co-isi na site òkù. Kpọtụrụ ụlọ akwụkwọ maka nkọwa.
Elementrị / Ahụkebe Student Education
Human na Social Development
Human na Social Development Community Track
Human na Social Development Onye Track
Biomaterials na anụ ahụ
Rosenstiel School of Marine na ikuku Science
Marine Science / n'ihi mmiri ọgwụ na molekụla Biology
Bachelor nke Arts Major
music (dị ka akụkụ nke a okpukpu abụọ isi ma ọ bụ na ihe na-abụghị obere.)
Bachelor nke Music majors
Commercial Music na Production
Music Business na Entertainment Industries
Musicianship, nkà Development, na itumgbere
Performance (instrumental, keyboard, ma ọ bụ olu)
Studio Music na Jazz (Instrumental ma ọ bụ Olu)
Bachelor nke Science Major
na Health Studies
Bachelor nke Science na Health Science
Health Science Management na Policy
Nga Occupational Agwọ
Nga Physical Agwọ
Bachelor nke Science na ndị nọọsụ
Bachelor nke Science na Public Health
Ịga n'ihu Studies
N'ihi mmiri ọgwụ na molekụla Biology
A ìgwè nke ụmụ amaala kwụrụ ụgwọ ahụ University of Miami (A) na 1925 n'ebumnobi na-enye “pụrụ iche ohere ịzụlite inter-American ọmụmụ, ka n'ihu kere na nkà na akwụkwọ ozi, na-eduzi ezi ihe ma na-eme nnyocha na mmemme na okpomọkụ ọmụmụ.”Ha kweere na a local mahadum ga-erite uru ha obodo. Ha gabiga ókè nchekwube banyere ọdịnihu ego nkwado maka um n'ihi na South Florida ala ọganihu bụ na ya elu. N'oge Jim okwukwa oge, e nwere atọ nnukwu ala-kwụrụ ụgwọ mahadum Florida maka ọcha ụmụ nwoke, ọcha nwanyị, na nwa coeds (UF, FSU, na FAMU, karị); na nke a dị, Um e tọrọ ntọala dị ka a na-acha ọcha,coeducational alụmdi.
The University malitere na ezi na 1925 mgbe George E. Merrick, nchoputa nke Coral Gables, nyere 160 acres (0.6 km2) nta $5 nde, ($67.5 nde, gbanwee n'ihi na ugbu a onu oriri) na mgbalị. Mbọ ndị a bụ ala contracts na mortgages na ezigbo ala na ụlọ e rere n'obodo. The University e kwụrụ ụgwọ on April 18, 1925 site Circuit Court maka Dade County. Site ọdịda 1926, mgbe mbụ na klas nke 372 ụmụ akwụkwọ debara aha na um,[ ala ọganihu dara, na-enwe olileanya maka a ngwa ngwa mgbake na kụriri site a isi hurricane. N'ihi na ndị ọzọ 15 afọ ndị University sonso nọgidere mgbaze. The ewu nke mbụ ụlọ campus, a maara ugbu a dị ka ndị Merrick Building, e hapụrụ ọkara wuru ihe karịrị iri afọ abụọ n'ihi na aku na uba na ihe isi ike. Ma ugbu a, klas ndị ẹkenịmde ke nso Anastasia Hotel, na partitions kewara klas, inye University mmalite aha otutu nke “Katọn College.”
na 1929, Walsh na ndị ọzọ so Board of Regents gbara arụkwaghịm na Ruth nke ida nke Florida aku na uba. Um nsogbu bụ oké na ụmụ akwụkwọ wee n'ụlọ n'ụlọ na Coral Gables obon ego na-edebe ya na-emeghe. A reconstituted iri so Board e onyeisi oche site um mbụ president Bowman Ezi Ashe (1926-1952). The ọhụrụ osisi gụnyere Merrick, Theodore Dickinson, E.B. Douglas, David Fairchild, James H. Gilman, Richardson Saunders, Frank B. Shutts, Joseph H. Adams, na J. C. Penney. na 1930, ọtụtụ ngalaba òtù na ndị ọzọ karịa 60 ụmụ akwụkwọ wee um mgbe University of Havana emechi n'ihi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọgba aghara. Um gbara akwụkwọ maka odida na 1932. na July 1934, na University of Miami e reincorporated na a Board of Trustees dochie Board of Regents. site 1940, obodo isi na-dochie ngalaba na ochichi ka trustees. The University ọbọhọ a n'oge ọgba aghara. N'oge Ashe si onyeisi oche, na University kwukwara School of Iwu (1928), na School of Business Administration (1929), na School of Education (1929), na Ukpep School (1941), na Marine Laboratory (1943, renamed na 1969 dị ka Rosenstiel School), ndị School of Engineering (1947), na School of Medicine (1952).
N'oge Agha Ụwa nke Abụọ, Um bụ otu n'ime 131 kọleji na mahadum mba na wee akụkụ ke V-12 Navy College Training Program, nke nyere ụmụ akwụkwọ a ụzọ ka a Navy ọrụ.
One of Ashe si andikabuana na-enyere aka, Jay F. W. Pearson, chere ka onyeisi oche na 1952. A gaa ngalaba so na a mmiri bayoloji site ahia, Pearson nọgidere na ọnọdụ ruo mgbe 1962. N'oge ya onyeisi oche, Um ọdịda ya nke mbụ ya doctorate degrees na hụrụ na-abawanye na aha karịa 4,000.
The mgbanwe nke 1960 na 1970 na-gosipụtara ya na um. na 1961, Um ama esịn ya iwu nke agbụrụ segregation na malitere ikwere na nwa akwụkwọ. African America E kwekwara full òkè-amụrụ na-eme na egwuregwu ìgwè. Mgbe President Stanford enwe nke nta na-eme egwuregwu, na December 1966, Um aka Ray Bellamy, ihe African American football player. na Bellamy, Um ghọrọ mbụ isi mahadum ke Deep South na a Black football player na mfọn. Um eguzobewo Office of Minority Affairs na-akwalite iche iche na ma Undergraduate na ọkachamara akwụkwọ Admissions. Na mmalite nke 1968 football oge, President Henry Stanford gbochiri ebre nke “Dixie” site University nke gbalaga.
Kemgbe ụwa, Um usoro nwaanyị na-amụrụ na-eduzi ihe karịrị ndị ikom omume na a na-arụ ọrụ n'okpuru Dean nke Women-ekiri ihe na ndị inyom. Um jikọtara iche iche Dean nke Men na Dean nke Women ọnọdụ ke 1971. na 1971, Um kpụrụ a Women Commission nke agbala a 1974 akọ na ọnọdụ nke ndị inyom na campus. The pụta bụ um si akpa nne malitere ọkà okwu, ụbọchị na-elekọta, na a Women Study obere. Ịgbaso enactment nke Mbụ na IX na 1972, na ọtụtụ iri afọ nke ịgba akwụkwọ, niile òtù, tinyere asọpụrụ ọha mmadụ bụ ndị na-emeghe ka ndị inyom. The Women Commission chọkwara achọpụtaghị ego maka ụmụ nwanyị egwuregwu. Terry Williams Munz ghọrọ nwaanyị mbụ na America ọdịda ihe egwuregwu mfọn mgbe o kwetara a golf mfọn si um na 1973.
site 1961 ka 1968, Um enyefe ụlọ na ya South Campus ije ozi dị ka ndị nzuzo ụlọ ọrụ nke Central Intelligence Agency si JMWAVE ọrụ megide Fidel Castro ochichi na Cuba. na 1968, mgbe ramparts magazine gụrụ CIA arụmọrụ na ndị ọzọ campuses, JMWAVE kpaliri kwụsịrị um campus n'ihi nchegbu maka ihere mahadum.
Henry King Stanford ghọrọ um atọ president na 1962. The Stanford onyeisi oche hụrụ ụba mesiri ike na research, reorganization nke ndutịm Ọdịdị na-ewu nke ọhụrụ ụlọ ọrụ. Otu n'ime ihe ndị na nchọpụta ọhụrụ na emmepe guzosie ike bụ Center maka Advanced International Studies (1964), na Institute of molekụla na Cellular Evolution (1964), Centre maka usoro iwu Studies (1965), na Institute maka Study of Aging (1975). n'okpuru Stanford, na 1965, Um malitere n'oru mba ụmụ akwụkwọ.
na 1981, Edward T. Foote II ghọrọ ụlọ akwụkwọ anọ president. N'okpuru Foote idu ndú, on campus-amụrụ ụlọ converted n'ime a usoro nke residential kọleji. Na mgbakwunye, Foote butere a afọ ise $400 nde fundraising mkpọsa nke malitere na 1984 na-akpọlite $517.5 nde. Ọ hụrụ onyinye mụbaa site $47.4 nde ke 1981 ka $465.2 nde ke 2000.
Foote nọchikwara site Donna Shalala, onye chere na um onyeisi oche na 2001. n'okpuru Shalala, Miami wuru ọhụrụ ọba akwụkwọ, dormitories, nchịkọta egwu mmeghari Ụlọ Nzukọ Alaeze, na klas ụlọ. The mahadum agụmakwụkwọ àgwà na-amụrụ quality nwekwara mma n'ihi na. N'oge Shalala idu ndú nke University of Miami, Miami kwadoro onye nke atọ mba televised U.S. president arụmụka nke 2004 U.S. president ntuli aka.
malite na 2002, Um mụụrụ a fundraising mkpọsa akpọ “ọkụ: The Campaign maka University of Miami” na-emecha-akpọlite $1.37 ijeri, ndị kasị ego zụlitere ọ bụla na mahadum na Florida dị ka nke February 8, 2008. Of na ego, $854 nde gara ọgwụ campus. on November 30, 2007, Um nwetara osisi cedar Medical Center na renamed ya “University of Miami Hospital”, inye Miller School of Medicine ihe na-ụlọ ozizi ọgwụ kama ịbụ naanị mmekọ na ebe n'ụlọ ọgwụ.
Lee nwekwara: University of Miami 2006 custodial ọrụ’ iku
on February 28, 2006, custodial ọrụ na Mahadum nke Miami, ndị na-butere na mahadum site a Boston, Massachusetts dabeere na ụlọ ọrụ, UNICCO, malitere a strikeprompted site boro nke ikenenke oru omume, substandard ụgwọ, enweghị ike uru, na-arụ ọrụ nchekwa. Mgbe ụmụ akwụkwọ ahụ malitere a agụụ iku na on-campus vigil, iku e biri na May 1, 2006. The mmezi rụpụtara a kaadị ọnụ bụ nke mere ka ndị ude nke mbụ n'otu-anọchi anya zụta unit na um. Um welitere ụgwọ ọrụ site $6.40 ka $8.35 kwa hour ma nye ahụ ike mkpuchi.
na 2008-09, Um zara aku slowdown site tightening expenditures. Mgbe ya onyinye furu efu ka 26.8% nke ya uru, impacting onyinye ego, ụlọ akwụkwọ na-enweta ihe karịrị 98% nke ya na-arụ ọrụ ego site isi mmalite ndị ọzọ.
na 2011, Um e họọrọ mba ahụ kasị fiscally-eme nonprofit nzukọ site Worth magazine, na a akụkọ agbala na mmekota na nonprofit Watchdog Charity akwọ ụgbọ mmiri.
Ị chọrọ atụle University of Miami ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
University of Miami na Map
photos: University of Miami ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke University of Miami.